Deg Deg:- Muuqaalo Aan Ka Helay Qunsulka Somaliya U Fadhiga Karachi Pakistan Oo Dhac Loo Gaystay (Daawo Maqal Muqal) ⋆ Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
Deg Deg:- Muuqaalo Aan Ka Helay Qunsulka Somaliya U Fadhiga Karachi Pakistan Oo Dhac Loo Gaystay (Daawo Maqal Muqal)
Jaaliyadda ssc Muqaalo Wararka Wikileaks Youtube April 8, 2017
Karachi(Allssc):7 Nin oo Hubeysan ayaa u dhacay Qunsuliyadda Soomaaliya ee Magaalada Karachi ee dalka Pakistan, waxaana ay dhaceen Computerro,Taleefanno iyo lacago kaash ah.
Raggaan hubeysan ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in ay jirdil u geysteen labo ilaalo ka ahaa Qunsuliyadda iyo sidoo kale labo qof oo Soomaali ah oo ku sugnaa Xarunta Dhismaha ay ku shaqeyso Qunsuliyadda.
Sida ay xaqiijiyeen Saraakiil ka tirsan Booliska dalka Pakistaan Kooxaha ayaa dhaca Geystay Saakay Aroortii Hore.
Kooxaha ayaa la sheegay muddo ka badan 4 Saac in ay ku sugnaayeen Xarunta.
Ciidamada Booliska ayaa waxa ay xuseen in ay wali wadaan Baaritaano kala duwan ,islamarkaana ay gacanta kusoo dhigi doonaan Kooxihii ka dambeeyay Falkaasi.
Qunsuliyadda Soomaaliya ee magaalada Karachi ee dalka Pakistaan ayaa la furay 16kii Bishii march ee sanadkaan waxaana ka qeyb galay Mas’uuliyiin ka socday dowladda Pakistaan iyo Safiirka Soomaaliya ee dalkaasi Marwo Khadia Mohamed Almalchzoumi.